Hetsika sy loka - Mahagaga Mag
Hetsika sy loka
Tapitra ny taona: Fotoana hankafizana antoko
Bangalore dia tanàna mahafinaritra izay mirehareha amin'ny kolontsaina cosmopolitan. Tonga teto ny olona avy amin'ny faritra rehetra amin'ny firenena amin'ny tanjona maro, na amin'ny fianarana izany na amin'ny asa. Tanàna be mpitranga eraky ny India izy izao ary…
Kaonseritra tsy azonao adino amin'ity taona ity any Etazonia
Ny iray dia mandehandeha amin'ny fandaharam-potoana 2014 ho an'ny seho ao amin'ny Wells Fargo Center any Philadelphia izay manasongadina andalana mahavariana misy vondrona sy olona samy hafa sy mahay. Ny tranon'ny vondrona baolina kitra Philadelphia 76ers mahavariana, ny Wells Fargo Center dia…
Entertainment/Hetsika sy loka
Misokatra amin'ny Fetiben'ny Sarimihetsika Cannes 2014 ny 'Grace of Monaco'
Manomboka anio ny Fetiben'ny Sarimihetsika Cannes andrasana fatratra 2014. Toy ny tsy tapaka, Cannes dia manokatra fanamarihana mahavariana. Tsy ela akory izao, mahafinaritra ny fisokafan'ny Cannes Film Festival. Cannes Film Festival 2014 dia misokatra miaraka amin'ny horonantsary resahina be, Grace…
Antony 3 hisintomana ireo tarika fampakaram-bady an'i DJ
Oktobra 18, 2017
Oh! Manjavozavo ve ianao raha hisafidy DJ na handeha hanao tadim-panambadiana mivantana? Olana mahazatra ny maro izany! Misy safidy marobe tokony hatao raha te hanana an'io fampakaram-bady préfek io! Inona ny tsiro mofomamy azo alaina, voninkazo inona…
Hetsika mozika sy kolontsaina andrasana fatratra any Angletera
Jolay 27, 2017
Betsaka ny zavatra tokony hatao amin'ity vanim-potoana ity amin'ny fety ara-kolontsaina sy mozika goavambe hita manerana an'i Royaume-Uni. Miomàna mba hampihomehy ny nofinofy, ny firaisan-kina ary ny fientanam-po izay ho fenoina miaraka amin'ny mozika sy ny fialamboly. Voatanisa etsy ambany…
Fifandraisan'ny mpamokatra mari-pankasitrahana Messes mahazatra
Jolay 7, 2017
Raha sendra mitady ny ampahany tsara indrindra amin'ny Award Show Producer ianao dia io no toerana ahazoanao torohevitra tsara indrindra tsy misy fisalasalana na mety hitranga. Raha mahita ny fifandraisana amin'ny famoronana horonan-tsary mety ianao dia tsy mila…
Entertainment/Hetsika sy loka/Mifosa/Movies/Music
Torolàlana ho an'ny lozisialy CRM
Fahatakarana ny fitantanana ny fifandraisana amin'ny mpanjifa Ny tanjon'ny rindrambaiko CRM dia ny famelana ireo orinasa hanangana tsy tapaka sy hitandrina ny fifandraisana amin'ireo mpanjifa ankehitriny sy ho avy. Amin'izao fotoana izao, ny rindrambaiko CRM dia efa lasa lavitra avy amin'ny fitaovana fitantanana fifandraisana fotsiny mba ho lasa sehatra matanjaka izay…
Ahoana ny fomba famolavolana fampisehoana mazika sy ho lasa mpanao majia mahomby amin'ny ankizy
Febroary 15, 2017
Raha nahazo fotoana hanaovana fampisehoana majika daholo ny olon-drehetra ao amin'ny antokony, dia ho hitanao fa ireo antoko ireo no tena antoko tsara indrindra na iray amin'ireo antoko tsara indrindra nananan'izy ireo. Notsiahivin'izy ireo ny fahatsiarovana nahafinaritra an'ny rehetra…
Jereo ny mari-pankasitrahana ny kintana faha-23 mivantana amin'ny Star Plus
Desambra 22, 2016
Niverina tamin'ity taona ity ny Star Screen Awards miaraka amin'ny fientanam-po hanomezam-boninahitra ireo talenta tsara indrindra amin'ny indostrian'ny horonan-tsarimihetsika Hindi & TV. Natao isan-taona ireo mari-pankasitrahana ireo ary tontonana mpitsara manam-pahaizana manokana avy amin'ny indostria no misafidy ny fanendrena tsara indrindra avy amin'ny…
Misafidy mozika ho an'ny fotoam-panambadiana samihafa
Desambra 3, 2016
Ny fampakaram-badinao dia iray amin'ireo andro manandanja indrindra sy mahafinaritra indrindra amin'ny fiainanao. Rehefa vita amin'ny fampakaram-badinao ihany ianao amin'ny farany, dia maniry ny ho afaka hijery azy io ary hahatsapa fahatsapana fahanginana sy fifaliana. Mba hanaovana izany,…